Hand Sanitizer ရနံ့ 45 ML
IBC/Drum တွင် 75% Alcohol ပိုးသတ်ဆေး
Alcohol/Hyamine သုတ်ဆေး ၁ ပြား
Alcohol/Hyamine သုတ်ခြင်း 10 ခု
အရက်/Hyamine သုတ်ခြင်း 50 ကျပ်
150 အပိုင်းပိုင်း Alcohol/Hyamine သုတ်ခြင်း။
Ethyl Alcohol ပါတဲ့ Hand Sanitizer Gel
Isopropyl Alcohol ပါတဲ့ Hand Sanitizer Gel
Ethyl Alcohol ပိုးသတ်ဆေး
Ethyl အရက် ပိုးသတ်ဆေး
Isopropyl Alcohol ပိုးသတ်ဆေး
Isopropyl အယ်လ်ကိုဟော ပိုးသတ်ဆေး အမွှေးအကြိုင်
TECH-BIO လက်သန့်ဆေးရနံ့ 45 ML
TECH-BIO Hand Sanitizer အစိုဓာတ် 500 ML
75% Alcohol ပိုးသတ်ဆေး
50ml 75% Alcohol ပိုးသတ်ဆေး TECH-BIO
500ml 75% Alcohol ပိုးသတ်ဆေး TECH-BIO
2.5L 75% Alcohol ပိုးသတ်ဆေး TECH-BIO
2021 70% Isopropyl Alcohol Hand Sanitizer ပိုးသတ်ဆေး...
အိတ်ဆောင် လက်သန့်ဆေး 45ml
လက်ကား TECH-BIO Hand Sanitizer Moisture 500 ML Su...
လက်ကား 500ml 75% Alcohol ပိုးသတ်ဆေး TECH-BIO Fa...
ထိပ်တန်း အရည်အသွေးမြင့် Hanging Hand Sanitizer - 20ml အိတ်ကပ် ha...
အောက်ခြေစျေးနှုန်း 1 Oz Hand Sanitizer - 20ml အိတ်ဆောင် လက်...
Hand Sanitizer Store အတွက် ကျွမ်းကျင်သော စက်ရုံ - 20 m...
အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော Hand Gel - 20 m...
75% အရက် ပိုးသတ်ဆေး ထုတ်လုပ်သူ OEM စိတ်ကြိုက်လုပ်ပါ။
လုပ်ငန်းစံသတ်မှတ်ချက် "မဟိုက်ဒရိတ်အီသနော (Q/RJDRJ 03-2012)" အဖွဲ့အစည်း၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အညီ တင်းကြပ်စွာ။ ZhongRong Technology Corporation Ltd.(စတော့ကုဒ်: 836455) သည် ဇီဝဓာတု၊ ဆေးဝါးဓာတုဗေဒ၊ ဓာတုဗေဒ နှင့် စွမ်းအင်သစ် နယ်ပယ်များတွင် အထူးပြုထားသည့် တရုတ်နည်းပညာမြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများထဲမှ တစ်ခုအဖြစ် ဂုဏ်ပြုခံရပါသည်။ "စဉ်ဆက်မပြတ်ဆန်းသစ်တီထွင်ခြင်းဖြင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းတိုးတက်မှုကို မြှင့်တင်ရန်" မစ်ရှင်ကို အခြေခံ၍ ကုမ္ပဏီသည် R&D၊ အီသနောထုတ်လုပ်မှုနှင့် စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်းတို့ကို အာရုံစိုက်လုပ်ဆောင်ပါသည်။
Ethyl Acetate ဓာတုပစ္စည်း ပေးသွင်းသူ China MOQ 10ton
Ethyl acetate သည် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုထားသော ကောင်းမွန်သောဓာတုဗေဒထုတ်ကုန်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အလွန်ကောင်းမွန်သောပျော်ဝင်နိုင်မှု၊ လျင်မြန်စွာခြောက်သွေ့မှု၊ USES ၏ကျယ်ပြန့်မှု၊ အလွန်အရေးကြီးသောအော်ဂဲနစ်ဓာတုကုန်ကြမ်းနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောစက်မှုအရည်ချင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး acetate၊ ethyl cellulose၊ chlorinated တို့တွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုထားသည်။ ရော်ဘာ၊ ဗီနိုင်းအစေး၊ acetate ဖိုင်ဘာအစေး၊ ဓာတုရာဘာ၊ အပေါ်ယံပိုင်းနှင့် ဆေးသုတ်ခြင်းများကို ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ 1၊ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အညစ်အကြေးအဖြစ်၊ အပေါ်ယံ၊ ကော်၊ ethyl cellulose၊ သားရေတု၊ ဖယောင်းပုဆိုးအရောင်ခြယ်ပစ္စည်းများ၊ ...
Ethyl Acetate ဓာတုထုတ်လုပ်သူ MOQ 20FT ကွန်တိန်နာ
Ethyl Acetate ပေးသွင်းသူ MOQ 20ft ကွန်တိန်နာ ကောင်းမွန်သောစျေးနှုန်းမြှင့်တင်ရေး
Ethyl acetate သည် အရေးကြီးသော အော်ဂဲနစ် ဓာတုကုန်ကြမ်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး acetamide၊ acetyl acetate နှင့် methyl heptene ketone စသည်တို့ကို ထုတ်လုပ်ရန် အသုံးပြုနိုင်ပြီး အနှစ်သာရ၊ ဆေး၊ ဆေး၊ အဆင့်မြင့်ပုံနှိပ်မင်၊ collodion ဝါဂွမ်း၊ nitrocellulose၊ ဆိုးဆေးနှင့် အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည် ၊ စားသုံးနိုင်သောအရသာအတွက် သောက်သုံးနိုင်သော ပိုကြီးသောဓာတုအမွှေးအကြိုင်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငှက်ပျောသီး၊ သစ်တော်သီး၊ မက်မွန်သီး၊ နာနတ်သီး၊ စပျစ်သီးရနံ့အရသာ စသည်တို့ကို ခွဲဝေပေးရန်အတွက် အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်အများအပြားကို ထုတ်ယူပြီး ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်စေသည့် အေးဂျင့်အဖြစ်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
လက်ဆေးဆပ်ပြာ Mousse Sanitizer Alcohol Free ပေးသွင်းသူ Jasmine Flavor
Foam hand sanitizer သည် အသုံးပြုရအလွန်လွယ်ကူသည်- 1. ပန့်ခေါင်းကို extruded ထားပြီး ရေစိမ်ခြင်း၊ ဆေးကြောခြင်းနှင့် အမြှုပ်ထွက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ 2. ဆေးပမာဏ သက်သာစေခြင်း- အသုံးပြုမှုတိုင်းသည် သာမန်လက်သန့်ဆေးကဲ့သို့ ပမာဏ၏ ထက်ဝက်မျှသာဖြစ်သည်။ 3. နှစ်ဆအကျိုးသက်ရောက်မှု- အလယ်အပိုင်းအတွင်း ပြုတ်ကျရန် မလွယ်ကူသော တိုက်ရိုက်အမြှုတ်ထွက်ခြင်း၊ အမြှုပ်ထဲတွင် ထိရောက်သောပါဝင်ပစ္စည်းများကို အပြည့်အဝအသုံးပြုခြင်း၊ သန့်ရှင်းရေး၊ ပိုးသတ်ခြင်း၊ အစိုဓာတ်ကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း။ သတိထားရမည့်အချက်များ 1. လက်သန့်ဆေးသုံးတဲ့အခါ အလွန်အကျွံမနှိပ်ပါနဲ့...
Foam hand sanitizer သည် အသုံးပြုရအလွန်လွယ်ကူသည်- 1. ပန့်ခေါင်းကို extruded ထားပြီး ရေစိမ်ခြင်း၊ ဆေးကြောခြင်းနှင့် အမြှုပ်ထွက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ 2. ဆေးပမာဏ သက်သာစေခြင်း- အသုံးပြုမှုတိုင်းသည် သာမန်လက်သန့်ဆေးကဲ့သို့ ပမာဏ၏ ထက်ဝက်မျှသာဖြစ်သည်။ 3. နှစ်ဆအကျိုးသက်ရောက်မှု- အလယ်အပိုင်းအတွင်း ပြုတ်ကျရန် မလွယ်ကူသော တိုက်ရိုက်အမြှုတ်ထွက်ခြင်း၊ အမြှုပ်ထဲတွင် ထိရောက်သောပါဝင်ပစ္စည်းများကို အပြည့်အဝအသုံးပြုခြင်း၊ သန့်ရှင်းရေး၊ ပိုးသတ်ခြင်း၊ အစိုဓာတ်ကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း။ သတိထားရမည့်အချက်များ : 1. လက်သန့်ဆေးသုံးတဲ့အခါ လက်ကိုမနှိပ်ပါနဲ့...
Hand Wash Soap Mousse Sanitizer Alcohol Free ပေးသွင်းခြင်း။
ZhongRong Technology Corporation Ltd.(စတော့ကုဒ်: 836455) သည် ဇီဝဓာတု၊ ဆေးဝါးဓာတုဗေဒ၊ ဓာတုဗေဒ နှင့် စွမ်းအင်သစ် နယ်ပယ်များတွင် အထူးပြုထားသည့် တရုတ်နည်းပညာမြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများထဲမှ တစ်ခုအဖြစ် ဂုဏ်ပြုခံရပါသည်။ မစ်ရှင် "စဉ်ဆက်မပြတ်ဆန်းသစ်တီထွင်ခြင်းဖြင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းတိုးတက်မှုကို မြှင့်တင်ပါ" ၊ ကုမ္ပဏီသည် R&D၊ အီသနောထုတ်လုပ်မှုနှင့် စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်းတို့ကို အာရုံစိုက်လုပ်ဆောင်ပြီး အနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော် ၎င်း၏ အထက်ပိုင်းနှင့် မြစ်အောက်ပိုင်း ထုတ်လုပ်မှုများကို အာရုံစိုက်ကာ စပါးမဟုတ်သော အပြိုင်အဆိုင်အများဆုံး ပေးသွင်းသူအဖြစ် ရပ်တည်နေပါသည်။
Ethyl Alcohol Hand Sanitizer Gel ပေးသွင်းသည့် ထုတ်လုပ်သူ
Mask တပ်ပြီး လက်ဆေးပါ။ ဤစကားလုံးခြောက်လုံးသည် ကပ်ရောဂါဆိုးအောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက် နေ့စဉ်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည် ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လက်များသည် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ သို့မဟုတ် မရည်ရွယ်ဘဲ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ဘက်တီးရီးယားများနှင့် ပိုးမွှားများစွာကို ထိတွေ့နေရပါသည်။ လက်ကို မကြာခဏ မှန်မှန်ကန်ကန်ဆေးကြောဖို့ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ အများကြီးပြောနေစရာ မလိုပါဘူး။ လက်မပါသော ပိုးသတ်ဆေးဂျယ် မွေးဖွားခြင်းသည် ပိုးသတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ရိုးရှင်းစေပြီး “ရေ” ကန့်သတ်ချက်မှ ကင်းလွတ်ကာ ပိုးသတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို လုပ်ဆောင်ပေးသည်...
Anhydrous Ethanol 99.98% ထုတ်လုပ်သူ နိုင်ငံတကာ
Ethanol absolute သည် မြင့်မားသောသန့်စင်မှုရှိသော Ethanol ၏ aqueous solution ကို ရည်ညွှန်းသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်၊ ၎င်းကို 99.5% ပါဝင်သော မဟိုက်ဒရိတ် အီသနောဟုခေါ်သည်။ Anhydrous ethanol သည် အီသနောနှင့် ရေ ရောစပ်ထားသည်။ Anhydrous Ethanol ပုံပန်းသဏ္ဍာန်နှင့် ဂုဏ်သတ္တိများအတွက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ- အထူးရနံ့ဖြင့် အရောင်မဲ့ အရည်။ အရည်ပျော်မှတ် (℃) : 114.1 နှိုင်းရသိပ်သည်းဆ (ရေ = 1): 0.79 ပွိုင့် (℃) : 78.3 နှိုင်းရအငွေ့သိပ်သည်းဆ (လေ = 1): 1.59 မတည်ငြိမ်မှု : မတည်ငြိမ်မှု အလင်းယပ်ညွှန်းကိန်း : 1.3611 (20 ℃) ​​Pro...
လက်ကား 500ml 75% Alcohol ပိုးသတ်ဆေး TECH-BIO စက်ရုံ
99.99% ပိုးမွှားအများစုကို သေစေတယ်။
ဤထုတ်ကုန်၏ ဘက်တီးရီးယားပိုးသတ်နိုင်စွမ်းကို သက်ဆိုင်ရာ အရည်အချင်းစစ်ဆေးမှုအေဂျင်စီမှ အမျိုးသားစံနှုန်းအတိုင်း စမ်းသပ်သည်။ Escherichia coli၊ Staphylococcus aureus နှင့် Candida albicans များကို ဤထုတ်ကုန်၏ထိရောက်သောပိုးသတ်နှုန်းသည် တစ်မိနစ်ကြာစမ်းသပ်မှုအခြေအနေအောက်တွင် 99.99% ရောက်ရှိနိုင်သည်။ ရလဒ်များသည် ကိုးကားရန်ဖြစ်သည်။
လိပ်စာ- Room1602 Vanke Center, No.970 Nanning Rd., Xuhui District, Shanghai 200235 (SH Office)
ဖုန်း : 0086 18821253359